I-Apple Music ibeka iiHits kwihlabathi liphela ngeeNgoma ezingama-25 eziSasaziweyo kumazwe ali-100 | Ndisuka mac
Ngokukhutshwa kwe-iOS 14.5, iApple isebenzise olu hlaziyo ukukhupha uluhlu lwadlalwayo oluboniswayo iingoma ezingama-25 ezidlalwa kakhulu kumazwe angaphezu kwekhulu ezivela kwihlabathi liphela, ukuba lithuba elihle lokwazi isandla sakho eyona nto iviwayo kwamanye amazwe / kwizixeko.
Olu luhlu lwadlalwayo lutsha sinako fumana kwiCandelo lokuHlola, zombini kwi-iPhone, i-iPad okanye iMac. Ukuba awungomsebenzisi we-Apple Music, ungalujonga olu luhlu esi sixhobo. Ukusuka kweli phepha lewebhu, unokumamela uluhlu lokudlalwayo.
Ubanga ukuba iingoma kolu luhlu lwadlalwayo zihlaziywa mihla le. Kukho nje ngaphezulu kweedolophu ze-100, kodwa inkampani esekwe eCupertino kunokwenzeka ukuba yandise inani lezixeko. Uluhlu olupheleleyo lweedolophu eziyinxalenye yeli candelo litsha leApple Music zezi:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Music izisa iiHlits kwihlabathi liphela ngeengoma ezingama-25 ezimameleyo kumazwe angaphezu kwekhulu